गतसाताको एउटा पत्रिकामा गृहजिल्लाको समाचार देखेँ । आफ्नो गृहजिल्लाको समाचार देखेपछि त्यो समाचारमा ध्यान गइहाल्यो किनकी गृहजिल्लाको समाचारले कस्को पो ध्यान नतान्ला र ! समाचार के रहेछ भनेर पल्टाएर हेरेँ । ओहो ! सुखद समाचार पो रहेछ : ‘५० गाविस रहेको सुर्खेत जिल्लामा खुल्ला दिसा मुक्त गाविसको संख्या १९ पुगेको छ । सुर्खेत जिल्लालाई सन् २०१५ सम्म खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसक्ने लक्ष्यस्वरुप खुल्ला दिसा मुक्त गराउने अभियान चलिरहेको छ । सन् २०१७ सम्म मुलुकलाई नै खुल्ला दिसा मुक्त बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य बनाइएको छ ।’
यो समाचारले अरुलाइ खुसी कत्तिको बनायो थाहा छैन मलाइ चाँही खुसी नै बनायो । ’cause आज भन्दा १५-२० बर्ष अघि घरघरमा चर्पी बनाउँ भनेर हामी टोलटोलमा नाटक देखाउँदै हिँड्थ्यौँ सुर्खेतका विभिन्न गाउँहरुमा । चर्पी नहुँदा मानिसहरु जताततै शौच गरिदिन्थे । गुहु गनाएर बाटोमा हिँड्न सकिँदैनथ्यो । ‘गुहु आयो कि गाउँ आयो’ भनेझैँ लाग्थ्यो । अँझ खासमा त मानिसहरु धून सजिलो हुन्छ भनेर पानीका मुहान भएतिरै गएर आची गर्थे । तर यतिवेला भने सुर्खेतमा खुल्ला दिसामुक्त गाउँ घोषणा अभियानले तिब्रता पाएको रहेछ ।
भएको के थियो भने : कच्ची चर्पीका लागि खनिएको खाडलमाथी मेवाको रुख ढालेर त्यसैको डाँठले टाँडी बनाएर अलिकति माटोले पुरपार गरी बाहिर तितेपातीले ’boutर झारा टार्नेगरी बनाएका रहेछन् । हामीले ‘प्रयोग नगर्नेले १ सय २० रुपिँया नपाउने’ खवर गरेपछि ‘केहि दिन त हो नि’ भनेर त्यही चर्पी प्रयोग गरेका रहेछन् घरका सवैले तर एक महिना पछि अनुगमन टोली संयोगवश उनैकहाँ पुग्यो र चर्पी कस्तो बनेको छ भनेर घरमुलीलाइ देखाउन भन्यो । बिचरा चर्पी भित्र पुगेर खाडलमाथी माटोले पुरेको कच्ची टाँडीमा आफ्नो चर्पी बलियो छ भनेर देखाउन एकचोटी लात्तीले के हानेका थिए माटोले पुरेको टाँडी र मान्छे स्वात्तै खाडलमा ! सवैजना गललल हाँस्न थाले बिचरा ती घरमुली चाँही डेढ मिटर गहिरो खाडलमा मेवाका कुहिएका डाँठ र आचीसंग लुट्पुटिएर गुहार गुहार भन्न थाले । एक महिनासम्म पानी हाल्दा कुहिइसकेको मेवाको डाँठले बनाएको कच्ची टाँडी न थियो के टिकोस् ।
यतिका प्रश्नहरु उठाउँदा पक्कैपनि निशाको सगरमाथा यात्रासंग यसको के दुश्मनी भन्ने प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । यसको जवाफ स्वरुप नायिका निशाले आफ्नो निजी खर्चमा सगरमाथा चढ्न सक्छिन कि भन्ने गत साताकै अर्को एक दैनिकमा प्रकाशित उनको खर्च विवरण ’bout प्रकाशित समाचारबाट पनि थाहा हुन्छ । जसमा निशा अधिकारीको मासिक खर्च ‘महिनाको ६७ हजार’ लेखिएको थियो । त्यसैले मासिक ६७ हजार रुपिँया खर्च गर्नसक्ने हैसियतवाली निशालाइ लाखौँ रुपिँया चन्दा दिएर पठाउन सक्नेले पाँच हजार रुपिँयामा एउटा गरीबका शौचालय बनाइदिने तर्फ किन ध्यान दिन सक्दैन?